Inqwelomoya ephezulu, nguJohn Gillespie Magee Jr. Iminyaka engama-75 yombongo weAirmen. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Imibongo
UJohn Gillespie Magee Jr. Wayeneminyaka elishumi elinethoba xa wabhala lo mbongo ngo-Agasti ka-1941. Wafa kwakamsinya emva koko, ngoDisemba waloo nyaka. Kwiminyaka engama-75 Uhambo oluphezulu ibikhona, ikho kwaye inokwenzeka ibeyintandokazi yee-aviators kwihlabathi liphela. Kwaye gem kancinane yesihobe. Kufanelekile ukukhumbula.
Kunqabile ukuba nemincili kunye nenkululeko yokubhabha kungabonakaliswa kakuhle kangaka. UJohn Gillespie Magee ufumene inkuthazo kuhambo ngenqwelomoya xa ibinzana elithi "chukumisa ubuso bukaThixo" lathi qatha engqondweni. Uhambo oluphezulu yaphela yaba ngumhobe, ngumbongo osemthethweni weRCAF (iRoyal Canadian Air Force) kunye neRAF, kuba uMagee wasweleka kumhlaba waseBritane. Kwaye ifundiwe, yenziwa, yaphefumlelwa, kwaye isetyenziswa amaxesha amaninzi.
Ngubani uJohn Gillespie Magee?
UJohn Gillespie Magee Jr wazalelwa eShanghai ngo-1922 kubazali abangabavangeli basemazweni. Uyise, uMfundisi uJohn Gillespie Magee, wayengumMelika kwaye umama wakhe wayenguBritane. Wabuyela eUnited States ngo-1939 waza wafumana isifundi kuYale, kodwa NgoSeptemba 1940 wangena kwi-RCAF waphumelela njengomqhubi wenqwelomoya.
Wathunyelwa e-United Kingdom ukugqibezela uqeqesho kwaye kamva waba yinxalenye ye-RCAF yokulwa neQela elingu-412., eseDigby, eNgilani. Xa wabhala lo mbongo, wayethumela ikopi yakhe kwileta eya kubazali bakhe. Wathi kubo: «Ndinithumela iivesi endizibhalileyo ngenye imini. Zenzeke kum ngeenyawo ezingama-30, kwaye ndizigqibile kwangoko ndakuba ndifikile emhlabeni.
UMagee wasweleka kwiinyanga nje ezintathu kamva kwaye kwiintsuku nje ezintathu emva kokuba iUnited States ingene emfazweni. Xa wayebhabha i-Spitfire yakhe kwindawo ephakame kangangeemitha ezingama-400, waqubisana emafini nenye inqwelomoya. Kuphando olulandelayo, umfama wathi wabona umqhubi we-Spitfire esokola ukuvula kunye nokutsiba ngaphandle kwe-cockpit. Waphumelela, kodwa esondele kakhulu emhlabeni, iparashute ayizange ivule ngexesha kwaye uMagee wasweleka kwangoko. Umqhubi wenye inqwelomoya naye wasweleka.
UMagee wangcwatyelwa emangcwabeni eHoly Cross, eScopwick (Lincolnshire), eNgilane. Y engcwabeni lakhe kubhalwe iivesi zokuqala nezokugqibela zika Uhambo oluphezulu.
Inguqulelo kunye nesandi sokuqala
Akukho ziguqulelo zithi "igosa" kwiSpanish, kodwa oku kunokuba yinto eqikelelweyo nesimahla endivumele ukuba ndiyenze. Kunjalo, i-cadence yesiNgesi ilahlekile xa ifundwa, kodwa ubuhle besicatshulwa buhlala buhleli. Isihloko sesona sihlupheka kakhulu kule lahleko. Impukane ephezulu o Cota ePhakamileyo ayikholosi kwaphela xa ithelekiswa nalawo sonorous Uhambo oluphezulu yangaphambili
Owu! Ndizikhuphile kumacala amabi oMhlaba kwaye ndadanisa esibhakabhakeni ngamaphiko ahlekisayo esilivere.
Ndinyuke ndaya eLangeni, ndaye ndadibanisa uvuyo lwamafu awela ngokukhanya kwawo - kwaye ndenze amakhulu ezinto ongazange uziphuphe - ndijikile, ndavuka kwaye ndilinganise apho phezulu, kuthe cwaka.
Ukubhabha esibhakabhakeni, ndileqe umoya ovuthuzayo ndaza ndayiqhubela ngenqwelomoya endiyithandayo ngeepaseji zomoya ezingapheliyo ...
Apho, apho esibhakabhakeni esiphezulu nesivuthayo ndiye ndafika ngokulula nangokuthantamisayo kwiindawo eziphakamileyo ezibethwa ngumoya apho ilitha kunye nokhozi zingazange zifike khona ngaphambili.
Kwaye ngelixa izivamvo zam ziphakanyisiwe kuthe cwaka ndidlulile kwindawo ephezulu engenakoyiswa yendawo, ndiye ndolula isandla sam ndachukumisa ubuso bukaThixo.
Ukuvala, yongeza ukuba impumelelo kaMagee yokufa kwakhe yavakala. Njengoko besesitshilo, Lo mbongo waba liculo, umfuziselo kwaye phantse umthandazo wabaqhubi kwihlabathi liphela. Emva koko nakoosomajukujuku. UMichael Collins uthathe ikopi kunye naye kwindawo yakhe yenqwelomoya kwi-Gemini 10 mission.
Ibingumthombo wokhuthazo lokuqanjwa komculo kwaye ibisetyenziswa amaxesha amaninzi kumdlalo bhanyabhanya, kumdlalo weqonga okanye kwiminyhadala yaseburhulumenteni. Kwi-cinema ibisemilebeni ukusuka, umzekelo, u-Orson Welles ukuya komncinci kakhulu URussell Crowe, ngubani owadlala ngokuchanekileyo umlo wenqwelomoya kwiMfazwe yesibini yeHlabathi eyayimi eCanada kwidrama yomlo yonyaka ka-1993 enesihloko esithi Ukulinda ixesha. Ewe, injengele edumileyo yaseSpain yayikwisikhundla kunye nefayile ngomhla wakhe. Kule ndawo, kwaye ngakumbi elizwini lakhe nakulutsha, lo mbongo uhambelana nayo yonke intsingiselo kunye nemvakalelo yokuyinikwa ngumqhubi wenqwelomoya wokwenene. Umqhubi wenqwelomoya owahamba ngenqwelomoya ngonaphakade kungekudala.
Ukulinda ixesha (Ngomzuzu) nguAaron Kim Johnston, ngo-1993.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » Uhambo oluphezulu, nguJohn Gillespie Magee Jr. Iminyaka engama-75 yombongo we-Airmen.
Enkosi Mariola ngala manqaku anomdla. Ndiyavuma ukuba bendingazi ngalo mbongo kunye nebali lawo, ewe ndiyibonile ifilimu oyicaphulayo nguRussell Crowe, kodwa ngoku ndibeka yonke into ngokomxholo.
Hayi enkosi. Iiakhawunti kumphathi wemipu esele siyazi ...
Libali elibuhlungu kwaye elinomdla. Bendingayazi. Kwaye bendingayazi imovie kaRussel Crowe nayo. Ndicinga ukuba iya kuba yenye yemisebenzi yakhe yokuqala ukuba ayingowokuqala. Ndabelane ngenqaku lakho kudonga lwam kuFacebook. Ngamahlwempu. Wayengafanelwanga sisiphelo esibuhlungu. Leliphi ithamsanqa ebenalo. Kwaye nomnye umqhubi wenqwelomoya, ewe.
Isanga esivela eOviedo.
Wamkelekile. Ndiyabulela kakhulu kwikhonkco. Ewe ndiza kuyeka.
Xa unako, tyelela i-Asturias kunye ne-Oviedo. Uya kuyithanda.
Ngapha koko, ndiyazingca ngeMfazwe yesibini yeHlabathi. Zininzi izinto ezincinci okanye ezingaziwayo kwaye ezinomdla kakhulu kule mfazwe.
Ukuwola kunye nokubulela kwakhona.
Ndinolu tyelelo ndilindileyo, ukuba kukwakho nabanye endibaziyo eGijon. Masibone ukuba ayizukuthatha ixesha elide.
Kwaye kubonakala kum ukuba sabelana ngokuthanda kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ukuba ndinenoveli ebekwe ngelo xesha kunye nenye apho ikwabonakala ngasemva.
Olo qeqesho lumangalisayo lubizwa ngokuba ngababalisi bamabali
Abalinganiswa boNcwadi boSuku: Luis Cernuda kunye noSam Shepard